နှာခေါငျးပိတျခွငျးကို ၁၅ မိနဈထဲနဲ့ သကျသာစမေယျ့ နညျးလမျးမြား
HomeKnowledgeနှာခေါငျးပိတျခွငျးကို ၁၅ မိနဈထဲနဲ့ သကျသာစမေယျ့ နညျးလမျးမြား
အမွဲတမျး နှာခေါငျးပိတျနတေဲ့သူတှကေ နရေထိုငျရခကျလို့ နှာခေါငျးပိတျတာကို မွနျမွနျပြောကျခငျြကွပါတယျ။
6. မကျြခုံးနှဈခုကွားကို နှိပျနယျပေးပါ။
မကျြခုံးနှဈခုကွားကို ညငျညငျသာသာ နှိပျနယျပေးရငျ ဦးခေါငျးခှံနဲ့ နှာခေါငျးပေါကျ ဆကျသှယျထားတဲ့ လလေမျးကွောငျး ရောငျရမျးတာကို ကာကှယျပွီးဖွဈစပေါတယျ။
5. နှာခေါငျးတဈလြှောကျ နှိပျနယျပေးပါ။
နှာခေါငျးတဈလြှောကျကို တဈမိနဈ၊ နှဈမိနဈ ကွာအောငျ ညငျညငျသာသာ နှိပျနယျပေးရငျ နှာခေါငျးအတှငျးက လလေမျးကွောငျးပှငျ့သှားပွီး အသကျရှူရတာ ကောငျးလာမှာပါ။
4. နှာခေါငျးနဲ့ နှုတျခမျး ကွားကနရောကို နှိပျနယျပေးပါ။
အပျေါနှုတျခမျးနဲ့ နှာခေါငျးကွားကို နှဈမိနဈကွာ နှိပျနယျပေးရငျ နှာခေါငျးအတှငျးက ရောငျရမျးတာတှေ မဖွဈတော့ပါဘူး။
3. လစေိုထိုငျးမှုထိနျးစကျကို အသုံးပွုပါ။
လစေိုထိုငျးမှုက 40% ထကျ နညျးတဲ့အခါ နှာခေါငျးထဲက နှာရညျတှကေ ခွောကျသှားပွီး အသကျရှူရတာ အဆငျပွသှေားမှာပါ။ နှာရညျတှကေမြားပွီး လစေိုထိုငျးဆက နညျးနမေယျဆိုရငျ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ဘကျတီးရီးယားတှေ ရှငျသနျနိုငျမှာပါ။ အသငျ့တျောဆုံး စိုထိုငျးဓာတျက 40 ရာခိုငျနှုနျးကနေ 60 ရာခိုငျနှုနျးအထိပဲ ဖွဈပါတယျ။
2. နှာခေါငျးကို နှေးနှေးထှေးထှေးထားပါ။
အနှေးဓာတျပေးထားတဲ့ လကျကိုငျပဝါနဲ့ပဲ ဖွဈဖွဈ၊ ရနှေေးထဲ ထညျ့စိမျထားတဲ့ လကျကိုငျပဝါနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ အနှေးဓာတျပါတဲ့ လကျကိုငျပဝါနဲ့သာ နှာခပြေါ။ တျောသငျ့ရုံနှေးတဲ့ ရနှေေးလောကျဆိုရငျ အဆငျပွပေါပွီ။ နှာခေါငျးကို နှေးနှေးထှေးထှေးထားရငျ နှာခေါငျးပိတျတာ သကျသာသှားမှာပါ။
နှလုံးခုနျနှုနျးက ပုံမှနျပဲဆိုရငျ၊ ခန်ဓာကိုယျကလညျး နှေးနတေယျဆိုရငျ နှာခေါငျးပိတျနတော မွနျမွနျသကျသာသှားမှာပါ။ 15 မိနဈကွာအောငျ လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျပေးလိုကျရငျ သှေးပူလာပွီး နှာခေါငျးပိတျနတော အဆငျပွသှေားမှာပါ။
နှာခေါင်းပိတ်ခြင်းကို ၁၅ မိနစ်ထဲနဲ့ သက်သာစေမယ့် နည်းလမ်းများ
အမြဲတမ်း နှာခေါင်းပိတ်နေတဲ့သူတွေက နေရထိုင်ရခက်လို့ နှာခေါင်းပိတ်တာကို မြန်မြန်ပျောက်ချင်ကြပါတယ်။
6. မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။
မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားကို ညင်ညင်သာသာ နှိပ်နယ်ပေးရင် ဦးခေါင်းခွံနဲ့ နှာခေါင်းပေါက် ဆက်သွယ်ထားတဲ့ လေလမ်းကြောင်း ရောင်ရမ်းတာကို ကာကွယ်ပြီးဖြစ်စေပါတယ်။
5. နှာခေါင်းတစ်လျှောက် နှိပ်နယ်ပေးပါ။
နှာခေါင်းတစ်လျှောက်ကို တစ်မိနစ်၊ နှစ်မိနစ် ကြာအောင် ညင်ညင်သာသာ နှိပ်နယ်ပေးရင် နှာခေါင်းအတွင်းက လေလမ်းကြောင်းပွင့်သွားပြီး အသက်ရှူရတာ ကောင်းလာမှာပါ။
4. နှာခေါင်းနဲ့ နှုတ်ခမ်း ကြားကနေရာကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။
အပေါ်နှုတ်ခမ်းနဲ့ နှာခေါင်းကြားကို နှစ်မိနစ်ကြာ နှိပ်နယ်ပေးရင် နှာခေါင်းအတွင်းက ရောင်ရမ်းတာတွေ မဖြစ်တော့ပါဘူး။
3. လေစိုထိုင်းမှုထိန်းစက်ကို အသုံးပြုပါ။
လေစိုထိုင်းမှုက 40% ထက် နည်းတဲ့အခါ နှာခေါင်းထဲက နှာရည်တွေက ခြောက်သွားပြီး အသက်ရှူရတာ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ နှာရည်တွေကများပြီး လေစိုထိုင်းဆက နည်းနေမယ်ဆိုရင် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ရှင်သန်နိုင်မှာပါ။ အသင့်တော်ဆုံး စိုထိုင်းဓာတ်က 40 ရာခိုင်နှုန်းကနေ 60 ရာခိုင်နှုန်းအထိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
2. နှာခေါင်းကို နွေးနွေးထွေးထွေးထားပါ။
အနွေးဓာတ်ပေးထားတဲ့ လက်ကိုင်ပဝါနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ရေနွေးထဲ ထည့်စိမ်ထားတဲ့ လက်ကိုင်ပဝါနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အနွေးဓာတ်ပါတဲ့ လက်ကိုင်ပဝါနဲ့သာ နှာချေပါ။ တော်သင့်ရုံနွေးတဲ့ ရေနွေးလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေပါပြီ။ နှာခေါင်းကို နွေးနွေးထွေးထွေးထားရင် နှာခေါင်းပိတ်တာ သက်သာသွားမှာပါ။
နှလုံးခုန်နှုန်းက ပုံမှန်ပဲဆိုရင်၊ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း နွေးနေတယ်ဆိုရင် နှာခေါင်းပိတ်နေတာ မြန်မြန်သက်သာသွားမှာပါ။ 15 မိနစ်ကြာအောင် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးလိုက်ရင် သွေးပူလာပြီး နှာခေါင်းပိတ်နေတာ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။